tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-12-02
Ny singa sivana amin'ny harato vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia antsoina hoe singa sivana vy tsy misy fangarony. Ny singa sivana dia vita amin'ny lamba dimy an'ny harato sinter amin'ny alàlan'ny superposition sy ny fantsom-panafahana. Ny singa sivana amin'ny efijery sinteran'ny vy tsy misy fangarony dia vita amin'ny st ...
Fahalalana momba ny singa sivana sivana vy
1. misy fizarana fenitra voafaritra ve ho an'ny singa sivana sinter? Afaka mividy singa sivana mahazatra ve aho? A: azafady, ny singa sivana sintered dia tsy ampahany mahazatra. Matetika, novokarin'ny mpanamboatra azy io arakaraka ny andiana sanda amin'ny antsipiriany toy ny habe, ny endrika, ny fitaovana ary ny sivana val ...
Araka ny akora mahazatra, ny harato vy tsy misy fangarony dia azo zaraina amin'ny karazany roa: efijery landy sy efijery vy. Ny efijery landy dia ny efijery voalohany, ary ny lamba vy tsy miovaova dia novaina avy amin'ny lamba landy. Ny harato vy dia ampiasaina amin'ny fanaovana sivana sy sivana ...
Sivana mandeha amin'ny fiara, Sivan-drano, Sivana amin'ny rivotra, Sivana tsy misy vy, Sivana entona indostrialy, Filtration amin'ny rivotra tsy miova,